EBEE KA MGBANWE GA ESI BỊARA ỤMỤ NAIJIRIA? – hoo!haa!!
NNA NNAMDI KEHINDE KANỤ ALỌTAWO AFARAUKWU
ENUGWU:NWA NGWỤRỌ KWERE MMADỤ N'AKA, IHE NWOKE YA KPỌNWỤỌ
ODOGWU BỊAFRA:GỊNỊ BỤ ESEMOKWU NNAMDI N'ASARI?
ISI KARA ỊGBAKA M, MA Ọ BỤRỤ NA ATIKU MERIRI - BUHARỊ
KANADA:AHỌPỤTAWO NWANYỊ ONYEIGBO KA ONYE OMEBEIWU
HMM! NWANYỊ 'BANKER' DINARA ỤMỤ NWOKE NARỊ ABỤỌ
ISE IGBÓ:ỤLỌIKPE SHARỊYA ENYEWO MKPEBI ỊPỊA NWA AGBỌGHỌ ỌNỤ ỤTARỊ IRI ASATỌ
EBEE KA MGBANWE GA ESI BỊARA ỤMỤ NAIJIRIA?
Ndi Igbo, mma mma nụ. Ọ dị m nnukwu nwute na ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ụmụ Naijiria na-ebe akwa maka nnukwu ihe nhịa ahụ dị n’ala anyị ugbu a. N’ime ibe akwa ndi a, onye ọbụla na-atụ aka atụgara gọọmenti nke ala anyị, nke steeti nakwa nke okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche.
Ị jụọ nwoke, ọ gwa gị na ya chọrọ mgbanwe. Ị jụọ nwanyị ọ gwa gị otu ihe ahụ. Onye ị jụrụ onye o bu n’obi maka iweta mgbanwe a bụ ebum n’obi ya, o nwere ike zaa gị: ‘gọọmenti’.
Ka m ghara igbu oge onye ọbụla ga-enwe mmasị ịgụ edemede a. Ihe mere m bụ nwa ọkụkọ ji eti mkpu a abụghị na ihe ji anyị bụ ụmụ Naijiria ga-ahapụ anyị aka nso nso a, kama n’ọbụ ka ụwa nụrụ olu m.
Dịka otu onye n’ime ndi nta akụkọ hoohaa, o ruela ihe dịka otu izu ụka unu nụdobere olu m. Ọ bụghị na agbara m arụkwaghị m. O bụghị na m dara oria, ọ bụghịkwanụ na akụkọ agwụla n’ụwa anyị nọ n’ime ya mọbụ n’obodo anyị bụ Naijiria.
Eri oge ahụ, anyị enweghị ọkụ. Mgbe anyị kpọtụrụ ndi na-ekesa ọkụ nke anyị na-akpọ NEPA (mana ọbụghị aha ha ugbu a), ha gwara anyị na isi igwe ọkụ anyị bụ transfọma adịghị mma. Mkpu niile anyị na-eti ma onwere ka-aga-esi bịa dozie igwe ọkụ a dịka ana-agwa onye ntị chiri okwu.
Mgbe ụfọdụ anyị nọọ ihe dịka otu ụbọchị ha-abịa kpaa ya aka, ọkụ achaa waa ụmụaka etie “ọpụnepaa!!!”. Ọdịkwanụ ihe dịka nkeji iri atọ ọkụ anyụọ, ụmụaka etikwa “hèèè!!”
N’igbu okwu nkenke, ihe a ka emegidere rue mgbede ụnyahụ, mgbe ndi nwere ọkpa ogologo gara na NEPA (ọbụghịkwa aha ha) lọta kwue na asị onye ọbụla n’ime anyị weta ole onwere ka-ewere ga zụta ihe aga-eji dozie ọkụ anyị.
Ọbụ ego a anyị tụkọtara n’ụtụtụ a ka eji mee ọkụ anyị na-enwu tááá dịka eletriki nke na nri igwe okwu m malitekwara rụwa ọrụ ọzọ.
OKWU NA-ESO AKỤKỌ:
Amatara m na ọtụtụ n’ime anyị ga na-ajụ, “kedu ihe ịtụ n’anya dị n’ogologo akụkọ a nwoke a na-akọ ebe a?”
Ebe iwe ọkụ ndi NEPA (ọbụghị aha ha), abụghịzrịrị ụmụ Naijiria ihe ọhụrụ, ọ bara uru na aga eji ụdịrị akụkọ a na-edechị ndi mmadụ ntị mọbụ anya n’akwụkwọ akụkọ?
Ma geenụ ntị ka m gwa unu, ọbụladị ndi a anyị na-akpọ NEPA sokwe eti mkpu mgbanwe n’ala anyị kịta. Ego niile anyị na-akwụ n’ụgwọ ọkụ kwa ọnwa, eji ya eme gịnị ma ọbụrụ na ọbụghị idozi akọrọ ngwa eji enye anyị ọkụ?
N’ime izu ụka a anyị nọ n’ọchịchịrị, echere m na ihe aga-eji dozie ọkụ anyị adịghị na obodo Naijiria, mana ozugbo anyị tụkọtara ego ndi a, oweghị ndi a akpọrọ NEPA otu awa ọkụ anyị lọghachite.
Ụdị ntarama ahụhụ a, esighị n’aka ndi gọọmenti kama ọbụ site n’aka ndi nje ozi otu ọrụ ọkụ anyị kpọrọ NEPZA. N’ụdị ọnọdụ dị etu a, kedu mgbe anyị ga-enweta ụdị mgbenwe nke anyị na-eti mkpu ya kwa ehihie kwa abalị?
Ụdị ụmụ arụrụma ala ndi a, ụmụ mpụ n’ghụghọ enweghị isi n’ọdụ ndi a, ụmụ iri ngarị nakwa awufu di etu a abụghị naanị n’ụlọ ọrụ NEPA ka ha dị. Arịrịọ m na ekpere m bụ ụmụ Naijiria biko dóó dòò dóó, onye ọbụla webinata aka ka ofe rọrọ arọ zuere anyị nrị.
Onye ọbụla gbaa mbọ mee ihe o kwesịrị ime n’ihu ọrụ ya, ka ihe kwesịrị ime anyị wee mee anyị.
Ka anyị wepu aka enwe n’ofe n’ihi na aka enwe dị n’ofe ụmụ Naijiria aghọwala aka mmadụ.
Onye ọbụla mara na o nwere nwa awọ, waa nwa awọ ya afọ ka onye nwere nwa nkakwụ mọbụ nkapị benata nwa nkakwụ ya ọnụ ka ije dịrị anyị nfe.
Ya gazie nụ!
Previous Post: Ilu taa ga ekwu maka oke ochịchọ
Next Post: UGWUANYỊ ETINYELA ỌCHỊ N’IHU NDI ENUGWU NGWO